ILianchuang Technology Group ibambe umhlangano ngokuhlanganyela wekota yesithathu | Lianchuang
Ekuseni ngo-Okthoba 13, iLianchuang Technology Group ibambe umhlangano ohlanganyelwe wekota yesithathu ka-2020 eLianchuang Academy. Usihlalo weqembu uLai Banlai, Abaqondisi Beqembu uZhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Usihlalo Umsizi uLai Dingquan nabanye abaholi, kanye nabaholi beqembu abahlukahlukene Izinhloko zeminyango esebenzayo, izinhloko zezinkampani ezahlukahlukene zezimboni, amalungu eKomidi Lezokuphathwa Kwezomnotho, kanye abaphathi bezezimali nabasebenzi bahambele lo mhlangano. Lo mhlangano ubuphethwe nguChen Ye, onguMqondisi Weqembu kanye noMsizi kaSihlalo.
Emhlanganweni, u-Liu Qinghui, iphini lemenenja jikelele we-Liantek, u-Yao Li, iphini lemenenja jikelele ye-Lianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, u-Wen Hongjun, umphathi jikelele we-Xinliangtian, u-Xu Jin, umphathi jikelele we-Lianchuang Electromechanical, no-Ning Chuanjiu , iphini lemenenja jikelele yeLianchuang Sanming, ngokulandelana lenze imisebenzi yekota. umbiko womsebenzi. Intatheli ngayinye isebenzise isethi yedatha ecacile nenembile, enezithombe nemibhalo ukuhlaziya okuhlelekile nokunaba ngokubuyekezwa kokusebenza kwekota yesithathu, ukuphothulwa kwemisebenzi emihlanu ebalulekile yonyaka, nezindawo ezikhanyayo nezimnyama kwikota yesithathu, futhi beka phambili uhlelo lokuqala lokusebenza kwekota yesine. Ngemuva kwalokho, u-Chen Ye, umqondisi weqembu nomsizi kasihlalo, wamemezela izinhloso zebhizinisi ezinkulu zegatsha ngalinye ngo-2021, futhi wahlela ikota yesine yomsebenzi wabasebenzi enkampanini ngayinye. Usihlalo Umsizi uLai Dingquan wenze amalungiselelo anemininingwane namalungiselelo omsebenzi ophelele wesabelomali weQembu wezi-2021.
Ngesikhathi somhlangano, u-Wei Weicong, oyinhloko yomnyango we-IT weqembu, ubike ngokuqaliswa kohlelo lolwazi lweqembu kanye nenkampani ngayinye ngo-2020. UChen Jiandong, umxhumanisi we-IT wangaphandle waleli qembu, wabelane ngamacala amahle kakhulu okwaziswa, futhi waphakamisa izindlela nezindlela zokwenza ngcono ukuphathwa kwebhizinisi ngosizo lwezinhlelo zolwazi. Isinyathelo sokuqala.
Usihlalo uLai Banlai wethule inkulumo yokuphetha, egcizelela futhi ecela umsebenzi ohlobene.
1. Qhubeka nokuqalisa futhi uhlanganise ukwakhiwa kolwazi. Leli qembu selitshale imali engaphezu kwama-yuan ayizigidi ezingama-20 ngaphambi nangemva kwalokho. Zonke izinkampani kumele zikhuthaze ukuphathwa kolwazi ngenkuthalo. Bonke abantu abasebenzisa amasistimu olwazi, kusuka ezingeni eliphezulu kuya kubasebenzi abajwayelekile, kumele bakhiphe izitifiketi zomsebenzi; 2. Inkampani ngayinye Ngokusebenzisa “amatafula amathathu okuthengisa”, sizohlola ngokujulile amathuba emakethe esifundeni ngasinye kanye nomkhiqizo ngamunye, futhi sibaleke ukuqeda izinkomba zebhizinisi zaminyaka yonke; kwikota yesithathu neyesine, inkampani ngayinye izokwenza amalungiselelo esabelomali se-2021 nomsebenzi obalulekile wabasebenzi; Okwesine, iqembu lethule amathalenta amaningana okuphatha abaphezulu embonini efanayo, wonke umuntu kufanele avule imiqondo yakhe, afunde komunye nomunye, afunde komunye nomunye, athuthuke ndawonye, ​​athuthukise ukusebenza kwenkampani nenzuzo, futhi athuthukise nezinzuzo zabasebenzi.
Ekugcineni, uLai Dong ukhuthaze wonke umuntu: "Qhubekani nijabule." Khuthaza wonke umuntu ukuthi enze izinto ngokweqile futhi enze kangcono, ukuze azitholele inani lakhe endaweni yesikhulumi seLianchuang futhi afeze amaphupho abo.
Kuze kube manje, umhlangano ohlanganyelwe wekota yesithathu weLianchuang Technology Group uphothulwe ngempumelelo. Umhlangano uhlele imisebenzi esemqoka yekota yesine futhi wacacisa ngohlelo lwamasu kanye nezinhloso zebhizinisi zango-2021. Inkampani izosebenzisa lo mhlangano njengethuba lokuthola okuhle, ukuvala ukushiyeka, nokwenza imizamo eqondile yokugijima kwikota yesine. Lwela ukulwa nomdlalo wokuvala wango-2020 bese ubeka isisekelo esiqinile sokuqala kuka-2021!